Roots - Sheekada Kunta Kinté - AFRIKHEPRI FOUNDATION
Isniinta 18 Noofambar, 2019
Dhibaatooyinka aadanaha - Alice Bailey (PDF)
Nabbarrada Acambaro waxay cadeynayaan in noocyada aadanaha ay la nool yihiin dinosaurs
Asalka iyo calaamadeynta ubaxa nolosha
Wareegga cad - Rosa Amélia Plumelle Uribe
Dhageyso liiska muusikada
Roots - Sheekada Kunta Kinté
By AFRIKHEPRI FOUNDATION Oktoobar 16, 2019
Sheekada Kunta Kinté
Maalintaas, dadka deggan tuulada yaryar ee ku yaala Gambia ma aysan ogaanin illaa iyo xad dambe ee musiibada: wiil yar oo yaraa ayaa la waayay, oo cilmi-baaris kasta oo ay ku heleen isaga oo aan weli helin wax aan micno lahayn. Wiilkani waligiis ma heli doono waalidkiisa, ama wadankiisa, ama qaaraddiisa. Si kastaba ha ahaatee, madaxa tuulada ayaa ka digay dadka deggan: ganacsatada addoonta ah ayaa ku soo boodaya, iyagoo raadinaya "alaab cusub". Sidaa daraadeed, waxaa la siiyay in ay ka fogaato tuulada marwo kasta. Laakiin wiilku wuxuu jebin doonaa mamnuucista isagoo kicinaya kaynta ...
Kunta Kinté ayaa dhammaaday wakhti uu bilaabay in uu ku afduubay gawaarida addoonta ah. Doontu waxay u qaadataa Annapolis, Maryland halkaasoo lagu iibiyo $ 155. Macallin, John Reynolds (Lorne Greene), waxay tiraahdaa Toby.
Waxaad ku jawaabtay "Roots - Sheekada Kunta Kinté" Dhowr daqiiqo ka hor
Natiijooyinka codadka 5 / 5. Tirada codadka 101
Nofembar 17, 2019
Nofembar 16, 2019
Nofembar 13, 2019
Nofembar 12, 2019